Kaydka | Swedbank
Akoonada kayda, lacaga, amaahda ama saamiyada? Waxaan bixinnaa qaab kala duwan ee kaydiska. Haddii aad rabtid in aad ogaata wax dheeri ah ee ku saabsan waxa ay ka koobanyhihiin, qofka ay uqalmaan iyo halista ay wataan, fadlan la xiriir xafiiska faraceena.
Inaad lacagyaada ku keydsato koontada keydka waxaad uga badbaadeysaa isbeddelada sicirka suuqa oo xilligaad doontana lacagtaada waa kuu diyaar. E-sparkonto waxaa laga furi karaa laguna maamuli karaa Bangiga internetka ama Aalad (App). Fasträntekonto iyo Sparkapitalkonto ayaa ah tusaalayaal kale oo akoonno ah oo aad wada-furan karto adigoo isticmaalaya la-taliye.
Sanduuqa maalgelinta waa lacago damaanad iyo/ama saamiyad aad wada leedihiin dhammaan dadka kale ee keydkooda ku darsada sanduuqaas maalgelineed. Sanduuqa maalgelinta waxaa maareeya maamulayaal loo qoondeeyay oo ka shaqeeya in maalgashigaagu uu kobco. Sanduuqa maalgelineed ee ay ku jiraan saamiyo ayaa loo arkaa inuu leeyahay halis aad u sareeysa laakiin waxaa ay sidoo kale fursad kuu siineysaa inaad hesho faa’iido weyn. Miisaaniyadda waxaa lagu keydin karaa gudaha koontada ISK (koontada keydka maalgashiga), taasoo u oggolaaneysa hab fudud oo canshuuro yer looga gooyo.
Sida ugu fudud oo aad ku kaydsan karta waa in aad samayso lacag dhigasho bile ah. Go'aanso lacag si otomaatik ah loogala baxayaayo kootada musharkaaga bil kasta.